Ciyaaryahannadii Ruushka Oo Looga Yeedhay Aqalka Madaxtooyada, Putin Oo Laba Jeer Telefoon U Diray Iyo Wixii Uu U Sheegay Oo Ay Fulin Waayeen – GOOL24.NET
Ciyaaryahannadii Ruushka Oo Looga Yeedhay Aqalka Madaxtooyada, Putin Oo Laba Jeer Telefoon U Diray Iyo Wixii Uu U Sheegay Oo Ay Fulin Waayeen
Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku wargeliyey ciyaaryahannada dalkiisa inay dhamaantood iska soo xaadiriyaan oo ay yimaaddaan aqalka Kremlin ee looga taliyo dalkaas kaddib markii ay ka hadheen Koobka Adduunka ciyaartii ay kaga hor yimaaddeen Croatia oo rikoodheyaal lagaga badiyey.
Ruushka oo martigeliyey tartanka Koobka Adduunka ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan, waxaanay iyadoon la filaynin u gudbeen wareegga siddeed dhamaadka iyagoo ka adkaaday Spain oo ka mid ahayd dalalka ugu awoodda badan, hase yeeshee waxa rikoodheyaal dirqi ah ku reebay waddanka Croatia, taas oo haddii ay ku adkaan lahaayeen ay ka mid noqon lahaayeen afarta dal ee iskugu soo hadhay Koobka Adduunka.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, ra’iissal wasaaraha waddanka Ruushka Medvedev ayaa shaaciyey inuu u hambalyeynayo xulkiisa oo si wanaagsan ay u ciyaareen, sharaf badanna ay soo hooyeen, hase yeeshee niskii dambe ee xalay ayaa afhayeenka madaxtooyada Ruushka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov waxa uu sheegay in tababaraha iyo dhamaan ciyaartooyadaba looga yeedhay aqalka madaxtooyada ee Kremlin, halkaas oo madaxweyne Putin uu ku sugayo.
Madaxweyne Putin ayaa ka hor intii aanay bilaabanin ciyaartii guul-darradu waxa uu khadka telefoonka kula hadlay tababare Cherchesov oo uu u rajeeyey guul, hase yeeshee telefoonkaas kuma faa’iidin, waxaana uu u dhallay guul-darro.
“Ptuin ayaa wacay Cherchesov Sabtidii ka hor ciyaarta, waxaanu u rajeeyey inay ku guuleystaan.” Sidaas waxa yidhi Dmitry Peskov, afhayeenka madaxtooyada Ruushka, hase yeeshee waxa uu intaa ku daray in markii ay ciyaartu dhamaatayna uu madaxweyne Putin mar kale telefoon u diray tababaraha oo uu u sheegay inuu ku sugayo madaxtooyada.
“Ciyaartu markii ay dhamaatay, Putin ayaa mar kale wacay, waxaanu u sheegay inay ciyaar wanaagsan soo banndhigeen oo ay u qalmayeen inay koobka qaadaan, ciyaar aad u qurux badan, ciyaar awood badan oo taariikhi ahna ay kala hor tageen Croatia” Sidaas ayuu mar kale yidhi afhayeenku.
Markii madaxweyne Putin intaas ku yidhi tababaraha xulka qaranka, waxa uu u raaciyey in dhamaan ciyaaryahannada iyo tababaraha iyo shaqaalaha kaleba ay ugu casuuman yihiin qasriga madaxtooyada oo uu la kulamyo.
“Madaxweynuhu wuxuu ku martiqaaday tababaraha iyo ciyaaryahannada xulka qaranka madal lagu soo koobayo natiijooyinkii ay ka soo hooyeen Koobka Adduunka, waxaanay falan-qayn doonaan arrimo la xidhiidha dhaqanka Ruushka ee Koobka Adduunka.” Ayuu mar kale yidhi afhayeenku.
Si kastaba ha ahaatee, shacabka Ruushka ayaa ku qancay qaab ciyaareedka iyo halka ay kasoo gaadheen Koobka Adduunkaba, sababtoo ah kulamadii saaxiibtinimo ee Koobka Adduunka ka hor dhamaantood waxa looga badiyey si xun, taasina waxay keentay in dad badan ay fishaan in wareegga koowaad aanay soo dhaafi doonin.